Polyurethane ရေမြှုပ်နှင့်အတူနှစ်ချက်အပိုင်းဂိုဒေါင်တံခါး China Manufacturer
Home > ထုတ်ကုန်များ > overhead အပိုင်းတံခါး > လူနေအိမ်အပိုင်းဂိုဒေါင်တံခါး > Polyurethane ရေမြှုပ်နှင့်အတူနှစ်ချက်အပိုင်းဂိုဒေါင်တံခါး
ကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုတံခါး panel ကသစ်သားစပါးကိုဆွဲရန် electrostatic အမှုန့်ပုံနှိပ်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုအသုံးပြု High-ခွန်အားကိုမြင့်မားသောခိုင်မာခြင်းနှင့်ချေး-ခံနိုင်ရည်လူမီနီယံအလွိုင်းတံခါးကို panel ကို၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကားဂိုဒေါင်တံခါးကို drive ကိုစနစ်ကအဆင့်မြင့်မြင့် servo system ကိုအသုံးပြုသည်နှင့်မဖြည်းဖြည်းချင်းရိုးရာကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုအဖြစ်အလျင်အမြန်ကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုဖွင့်ဖို့ hofic servo motor ကိုအသုံးပြုသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်မြန်ဆန်ပိတ်ပွဲ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်းထိထိရောက်ရောက်ဝင်ကနေအခြားအမှုအရာတို့ကိုတားဆီးနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှင့်ဆက်စပ်ကားတစ်စီးပေါ်ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှု, APP ကိုထိန်းချုပ်မှု, မိုဘိုင်းဖုန်းရဲ့ထိန်းချုပ်မှုနဲ့အသိဉာဏ်စနစ်ကထိန်းချုပ်ကိုသုံးနိုင်သည်။
ပါဝါပြတ်တောက်နှငျ့ ပတျသကျ. ကားဂိုဒေါင်တံခါးကို backup တစ်ခု power supply နှင့်အတူ configured နိုင်ပါတယ်သို့မဟုတ်ပါကကိုယ်တိုင်တက်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာ backup လုပ်ထား power supply ကိုသုံးပါရန်အကြံပြုသည်။ တံခါးကို panel ကိုရဲ့ style အခြားစတိုင်များများအတွက်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်။
အလိုအလျောက်ကားဂိုဒေါင်တံခါး / High Speed တံခါး / စက်မှုကြိတ်စက် Shutter ဆွဲယူ
2. Adjustments စက်သီး brackts ။
1. အနိမျ့ MOQ: တစ်ခုမှာ set ကိုပထမဦးဆုံးအဆင်ပြေကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးခြင်းများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
2. ကောင်းသောအရည်အသွေး: သင့် client ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးပေါ်ကျေနပ်မှု။ သင်သည်သင်၏စျေးကွက်အတွင်းမှကောင်းသောဂုဏ်သတင်းရနှင့်ပိုပြီးအမိန့်ရယူနိုငျပါသညျ။
3. ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှု: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မတိုင်မီဝန်ဆောင်မှုနှင့်ရောင်းချပြီးနောက်။
5. OEM ကြိုဆိုဖြစ်ပါသည်
ပုဒ်မ Transparent Polycarbonate ဂိုဒေါင်တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ပုဒ်မအပေါ်မှငှက်မြင်ကွင်းမှ PU မြှုပ် insulator တွင်လည်းကားဂိုဒေါင်တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကားဂိုဒေါင်တံခါးဖွင့်အဝေးမှ ကားဂိုဒေါင်တံခါးပြုပြင်ခြင်း ကားဂိုဒေါင်တံခါး Springs ကားဂိုဒေါင်တံခါးအော်ပရေတာ ကားဂိုဒေါင်တံခါးတပ်ဆင်ခြင်း ကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုယ်ရေးဖိုင် ကားဂိုဒေါင်တံခါးအာရုံခံ ပုဒ်မဂိုဒေါင်တံခါးမွမ်းမံ